Wabona ukuthi baqinisile ukuba apheke okuthile okumnandi. Babheka nhlobo ezithakazelisa kakhulu Public Culinary, ukukhetha isidlo mnandi kakhulu, wenza uhlu lwezimfanelo imikhiqizo udinga ukuthenga, uya esitolo, futhi ekugcineni wangena emkhunjini yamaprojekthi - inqubo ukulungiselela. Kodwa into: iresiphi icacisa ukuthi kumelwe athathe ncamashi 100 amagremu elayisi - kungekho futhi akukho kancane. Hhayi-ke, uma kukhona Ukugunda wokulinganisa inkomishi noma unayo ephelele iso ukulinganisa. Kodwa uma akekho noma enye-ke wazi kanjani - amagremu 100 irayisi - singakanani?
Indlela ngiyolinganisa amagremu 100 ubhontshisi ingilazi?
Ngakho, inselele iwukuba ukulinganisa ethile irayisi, okungukuthi 1/10 ikhilo phambi kwakho. Ngisho noma ungenayo amathuluzi esikhethekile enesisindo, ekhishini kumele libe khona lapho ingilazi. Yebo, ingilazi ezivamile, ihlanganise 200 wamanzi. He is okuthile wena uyakusophula. isiqukathi okunjalo yokuhlala ncamashi 180 amagremu amabele. Yesilinganiso uhlukanise ngesigamu ingilazi futhi uqaphele ezakheke ngesikhathi esifanayo. Ngokuvamile iziqukathi ezifana abe phansi ewumngcingo kanye phezulu ebanzi. Gcwalisa ingilazi isigamu-okusanhlamvu dosypte a irayisi kancane - nje kwesigamu isentimitha. Manje ngoba sewuyazi ukuthi kungakanani udinga ukuthatha umkhiqizo ezifana irayisi. 100 amagremu - lena kangakanani? Kunjalo, kancane ngaphezu kwesigamu ingilazi. Mhlawumbe, le ndlela akukuniki kungenzeka ukubala isisindo ummbila igremu eliseduze. Nokho, kubhekwa elula kakhulu futhi fast.
UMdwebo 100 amagremu - lena kangakanani? Wazi kanjani ngesipuni?
Uma uthanda ukunemba kukho konke futhi ungathandi ukuba nesineke, indlela ukukala ubhontshisi nezinkezo sengathi okuningi. Enough ingalo Cutlery kanye modicum ukubekezela. Ukulinganisa iqolo ngosizo isipuni, kubalulekile ukubheka lokhu okulandelayo: ithisipuni elilodwa kunesithembiso 5 amagremu elayisi (awekho amaslayidi). Ngakho, impendulo yombuzo othi, irayisi 100 amagremu - lena kangakanani? - lokhu: ncamashi amathispuni ama-20. Umsebenzi kungenziwa lula, uma kungekhona ukuthatha itiye, futhi isipuni. Kukholakala ukuthi kwelinye isipuni ibekwe 15 amagremu yokusanhlamvu (awekho amaslayidi). 100 грамм риса - это сколько столовых ложек? Ngakho-ke, amagremu 100 irayisi - kuyinto wezipuni eminingi kangaka? wezipuni 6 nengxenye: Kasibili kweqiniso.
Ezinye izindlela ukukala ncamashi 100 amagremu elayisi
Sishilo kakade ezinesisindo eyodwa noma omunye umkhiqizo (kuleli cala, irayisi), ungasebenzisa izikali ekhishini noma elingeyona inkimbinkimbi - inkomishi wokulinganisa. Nokho, uma ufunda lokhu, khona-ke ngokuqinisekile futhi yokuqala noma yesibili akanayo. Ngaphezu ukulinganisa isisindo okusanhlamvu inkomishi kanye isipuni khona ngangokunokwenzeka ngendlela elula. Nokho, wenza kuphela uma kwenzeka ukuthi okusanhlamvu okusha ngaphambi upakishe. . Ngokuvamile, semolina ezipakishiwe 600-700 g. рис, 100 грамм - это сколько, следует визуально разделить упаковку на 10 частей. Ukuze uqonde ukuthi singakanani udinga ukuthatha irayisi, 100 amagremu - lena kangakanani kufanele kube zibukeke ukwehlukana iphakethe ibe izingxenye 10. Ngakho, 1/10 futhi ngeke kanjalo nenani okusanhlamvu okuyilona elidingekayo ukuze umuntu kokulungiselela isidlo esithile.
Lezi namaqhinga kancane kuzokusiza kokuhlupheka ekubonile okumnandi kakhulu umcabango Culinary. Ake inqubo ukupheka kushaya umoya, futhi umphumela walo uletha i fun ongenakuqhathaniswa futhi idlule amathemba akho!
Isinkwa Stale: indlela yokwenza soft? Indlela yokusebenzisa isinkwa lidala?
Pepper eyayigcwele: yini futhi kanjani ukusebenzisa